Isiqulatho (-phephile) sivela kwifilosofi yamaGrike oku kuthetha ukuthanda. Amagama aphela kunye (-phephile) abhekisela kumntu okanye into ethanda okanye enothando, ukukhanga okanye ukuthande into ethile. Kwakhona kuthetha ukutyekela into ethile. Amagama afanelekileyo afaka (-phiphi), (- i-philia), kunye (-philo).
Amagama aphelayo: (-phephile)
I-Acidophile (acido-phile): Iimpawu ezinokukhula kwiindawo eziluhlaza zibizwa ngokuba yi-acidophiles.
Ziquka ezinye iibhaktheriya, i- archaeans , kunye nefungi .
I-Alkaliphile (alkali-phile): I-alkaliphiles yimizimba ekhulayo kwimimandla ye-alkali kunye ne-pH ngaphezulu kwe-9. Bahlala kwiindawo zokuhlala ezifana ne-carbonate ehlabathini ecebileyo kunye namachibi e-alkaline.
Barophile (i-baro-phile): I- barophiles yimizimba ehlala kwindawo ephezulu yokunyanzeliswa kwengqondo, njengendawo engqongileyo yolwandle.
I-Electrophile (i-electro-file): I-electrophile yinkomfa ekhanga kwaye iwamkela i-electron kwi-chemical response.
I-Extremophile (extremo-phile): Umzimba ohlala kwaye uphumelele kwiindawo ezimbi kakhulu ubizwa ngokuba yi- extremophile . Iindawo zokuhlala ezinjalo ziquka indawo yokuqhuma kwe-volcanic, imihlaba yelyuwa, kunye neendawo ezinzulu zolwandle.
IHalophile (i-halo-phile): I-haloophile yimizimba ekhulayo kwiimeko kunye neendawo eziphezulu zetyuwa, ezinjengamachibi esetyu.
Pedophile (pedo-phile): I-pedophile ngumntu onomtsalane ongathandekiyo okanye onothando lwabantwana.
I-Psychrophile (i-psychro-phile): Umzimba okhulayo kwiindawo ezibandayo okanye ezinqabileyo yi-psychrophile. Bahlala kwiindawo ezisemaphandleni nakwiindawo zokuhlala zolwandle.
I-Xenophile (xeno-phile): I-xenophile yinto ethandwayo kuzo zonke izinto zangaphandle kuquka abantu, iilwimi kunye neenkcubeko.
I-Zoophile ( zoo- life): Umntu othanda izilwanyana uyisisophili.
Eli gama linokubhekisela kubantu abanomdla wokuziphatha ngokwesini kwizilwanyana.
Amagama aphelayo: (-phili)
I-Acrophilia (acro-philia): I- Acrophilia ithando lweendawo eziphakamileyo okanye eziphakamileyo.
I-Algophilia (algo-philia): I- Algophilia ithande intlungu.
I-autophilia (i-auto-philia): I- autophiliya yintlobo yesithandabuzo sokuthanda.
I-Basophilia (baso-philia): i- Basophilia ichaza iiseli okanye izakhi zeseli ezithandwa kwiidysi ezisisiseko. Iigazi zegazi ezimhlophe ezibizwa ngokuba yi-basophil ziyimimiselo yalolu hlobo lweseli. I-Basophilia ichaza kwakhona imeko yegazi apho kukho ukwanda kwe-basophil ekusasazeni.
I-hemophilia ( hemo- philia): I- Hemophilia yintlupheko yegazi exhatshazwayo yecala lokuphuma kwegazi ngenxa yesiphene kwi-clotting factor factor. Umntu onesi-hemophilia unomdla wokuphuma kwegazi ngokungalawulwayo.
I-Necrophilia (necro-philia): Eli gama libhekisela ekuthandweni okungavumelekanga okanye ukukhanga izidumbu.
I-Spasmophilia (i-spasmo-philia): Le nkqubo ye-nervous condition iquka i-motor neurons ezixhalabileyo kwaye zenze i-convulsions okanye spasms.
Amagama aphelayo: (-phiphi)
I-Aerophilic (aero-philic): Iimpawu ze- Aerophilic zixhomekeke kwi-oxygen okanye emoyeni ukuze zisinde.
I-Eosinophilic (i-eosino-philic): Amaseli okanye iishubhu ezitshatyalaliswa kalula ngombala we-eosin zibizwa ngokuba yi-eosinophilic.
Amaseli egazi ezimhlophe abizwa ngokuthi i-eosinophil yimizekelo yamaseli eosinophili.
I-Hemophilic (i-hemo-philic): Eli gama libhekisela kwizinto eziphilayo, ngakumbi iibhaktheriya, ezinokubambisana kwamaseli obomvu kwaye zikhule kakuhle kwiinkcubeko zegazi . Kwakhona kubhekisela kubantu abane-hemophilia.
I-Hydrophilic (i-hydro-philic): Eli gama lichaza into enomtsalane oqinileyo okanye ohlangene namanzi.
I-oleophilic (i-oleo-philic): Iimeko ezinomlinganiselo oqinileyo weoli zibizwa ngokuba yi-oleophilic.
Oxyphilic (oxy-philic): Eli gama lichaza iiseli okanye izicubu ezinamaqabane e-acid edayi.
I-Photophilic (ifoto-philic): Izinto ezithandwa kwaye zikhula ngokukhanya ziyaziwa njengezilwanyana ze-photophilic.
I-thermophilic (i-thermo-philic): i- Thermophilic organisms yilabo abahlala kwaye bahlala befudumeza kwiindawo ezifudumeleyo.
Ingaba i-Glass iLoquid okanye i-Solid?
Amagama eziSeko ezi-10
I-Body Falling Body - Inkinga ye-Physics
Water Molecular Formula
Yintoni iWindows Diocletian Window?
Mayelana neKlayenti yeCheerleader yebhola
Ukudlala njani i-Craps - Ikhosi yeCrash
Imithandazo Evulekileyo Yokucela Umtshato WamaKristu
I-20 Best Illmatic Lyrics
Imbali kunye neZenzo zoMongameli kaMongameli